Waa maxay SEO dabiici ah? | Martech Zone
Jimce, Maarso 7, 2014 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
Haddii aad rabto inaad fahanto hagaajinta mashiinka raadinta, runti waa inaad joojisaa dhageysiga kuwa warshadaha doonaya inay ka faa'iideystaan ​​oo aad si fudud ugu karkariso talada Google. Waa tan sadar wanaagsan oo ka timaadda Hagaha Bilowga Mashiinka Raadinta:
In kasta oo cinwaankan cinwaankiisu ka kooban yahay ereyada "mishiinka raadinta", waxaan jeclaan lahayn inaan dhahno waa inaad ku saleeysaa go'aammadaada hagaajinta ugu horreyn uguna horreyso waxa ugu wanaagsan martida boggaaga. Iyagu waa macaamiisha ugu muhiimsan ee macluumaadkaaga waxayna adeegsanayaan makiinadaha raadinta si ay u helaan shaqadaada. Xoog saarida xoog saarida khaaska ah ee gaarka ah si loo helo darajo natiijooyinka dabiiciga ah ee matoorada raadinta waxaa laga yaabaa inaysan keenin natiijooyinka la rabo. Raadinta mashiinka raadinta waxay ku saabsan tahay inaad cagtaada ugufiican u dhigto bartaada marka ay timaado aragtida makiinadaha raadinta, laakiin macaamiishaada ugu dambeysa waa isticmaaleyaashaada, ma ahan makiinadaha wax raadinta.
Google waxay ku leedahay talo adag gudaha shaqaalaynta lataliyahaaga xiga ee SEO, sidoo kale. Talada aan siinayo macmiisha waa mid si fudud u fudud… ka faa ideysi madal ay ku shaqeeyaan aaladaha uu Google karti u siiyay, ka dibna dhis, wadaag iyo kobcin waxyaabahaas iyada oo loo marayo istiraatiijiyad suuqgeyn weyn Tani infographic ka SEO Sherpa wuxuu si fiican u muujinayaa istiraatiijiyadda.
Mid ka mid ah qoraalkan, infographic wuxuu ka digayaa waxyaabo nuqul ka kooban. Nuqul nuqul ka mid ah waxay noqon kartaa arrin haddii aadan u adeegsanayn iskuxirayaasha awoodeed si aad ugu riixdo awoodda qodobka asalka ah, laakiin Google kama ciqaabin.
Tags: qalabayntadharbaaxobogagga albaabbadamawduucyo kala duwangoogle +qoraal qarsoonqalabka muhiimka ahisku weydaarsiga xiriirintaisku xidhka beerahaisku xidhka spamsoosaaray seoseo dabiici ahlacagaha lagu qoro baloogyadaxiriiriyeyaasha la bixiyayhagaajinta mashiinka raadintaayna search engineSEOwaxyaabaha khafiifka ah
Mar 10, 2014 at 7: 11 AM
Waad ku mahadsantahay wadaagida macluumaadka ee Douglas! Waxay si fudud u soo koobeysaa kaliya waxa aan uga baahanahay aasaaska SEO Organic.
Douglas, runtii waan jeclahay qodobka ku saabsan inaan la maareynin matoorada raadinta. Abuuritaanka nuxur wanaagsan sida macluumaadkaaga infograhpics uu tilmaamayo waxay ku saabsan tahay sameynta shaqada si loo abuuro waxyaabo qiimo leh oo ka farxiya Google laakiin ka muhiimsan oo ka farxinaya akhristayaashaada. Ugu dambeyntii waxay ku saabsan tahay akhristayaasha. Way jecel yihiin wayna ka helaan qiimo, way soo noqdaan oo waxay u gudbiyaan saaxiibadood. Dad badan oo suuqley ah ayaa maanta baraya xeelado deg deg ah oo aan lahayn awood sii joogitaan ah. Faahfaahin wanaagsan.Waad ku mahadsantahay wadaagista.
Mar 15, 2014 at 5: 26 AM
Xuquuqda on @ disqus_3MEg2e280Z: disqus! Kala sarreynta raadinta waa ciyaar waqti dheer ah iyo sheyga suuqgeynta waxyaabaha ku jira. Waxaa jira xoogaa (haddii ay jiraan) taatiko deg deg ah oo dhalisa natiijooyinka SEO ee waara bogga websaydhka.
Mar 15, 2014 at 5: 12 AM
Waad ku mahadsantahay wadaagida tan akhristayaashaada Douglas. Waxaan rajeynayaa inay qiimo ka helaan it James ~ SEO Sherpa
Mar 27, 2014 at 9: 19 AM
cajiib post..Run ahaan, kaliya SEO-ga dabiiciga ah waa in la raaco sida SEO-ga waxsoosaarka loo yaqaan 'SEO Manufactured' ayaa kuu keeni doona guul muddo gaaban laakiin taasi ma sii socon doonto muddo dheer. SEO-ga dabiiciga ah wuxuu kuu keenayaa natiijooyin wanaagsan oo muddo dheer socday.
2, 2014 at 2: 35 AM
Websaydh ayaa dhisma iyada oo aan la buuxin kumbuyuutar iyo waxyaabo khafiif ah - tani waa SEO-ga dabiiciga ah? Tani waa nagu cusub tahay waana macluumaad aad u wanaagsan! Intaa oo dhan, qaar badan ayaa galay SEO-ga la soo saaray tanina waa baraarujin, gaar ahaan in dabiiciyuhu runti noqdo kan la isticmaalo.